गजल - याथार्थ
गीत - आशा
मुटुमै खिच्यौ त्यो सिमारेखा,मनकै भो हदबन्दी कटौती ...
गजल - मन
मनोन्यास - मान्छे र दिशाहिन राजनीति
गजल - समय
गजल - मदिरा
मुटु कोपरेर हास्यौ तिमी दिमागमा तनाब थियो
जती होसियार भए पनि सुझाबुझ लुटी गयो
जुग्जुग टिक्ने सुमधुर ,सङगित हालेको थिए
हिउद बर्षा केही नभनी तिमीलाई रोपी रहे
हाम्रो मायाको अबसानमा मलामिको खाचो थियो
मादरिको जातै यस्तो हो कि तमासामा जुटी गयो
एकक्षिण् बिछोड हुँदैमा, माया मारयो भन्ने नठान।
धुँवा उडेको नदेख्दैमा, आ मरयो भन्ने नमान।
जीवनको यो गोरेटोमा उकालो ओरालो आउछ।
मेटाइ यी बन्धननहरु एक दिन खुशीले छाउछ।
ठेस लागेर लडयो भन्दैमा हिन्नै सकेन भन्ने नठान।
केहीक्षेण बिश्राम लिदैमा हरेस खायो भन्ने नमान।
अध्यारो हटेर जानेछ उज्यालो अबस्य आउने छ।
जीवनको हर मोडमा एकदिन सान्तीले छाउने छ।
पात हल्लिएन भन्दैमा आँधी रोकियो भन्ने नठान।
एकक्षिण सोचमा पर्दैमा बिश्राम लियो भन्ने नमान।
चुनाव संबिधान सभाको तर राजनैतीक पार्टीका कार्यकर्ताहरुको भिडन्त हेर्दा लाग्छ यो एउटा संसदीय चुनाव हो। पार्टीहरु आफ्नो बहुमत जुटाउन हरतरहले लागिरहेका छन। भाषाणमा आरोप-प्रत्यारोप त बुझिने कुरो हो तर कार्यकर्ताहरु मारामारीमा लागेका छन। कार्यकर्ता देखी उम्मेद्वार सम्मको ज्यान गुमेको छ। संबिधान सभा भनेको सरकार बनाउने सभा होइन र बहुमत ल्याउन यस्तो बिध्न उध्यम गर्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन। बहुमत हुनेले संबिधान बनाउने भए सिधै संसदको चुनाव गरेको भए हुन्थ्यो वा अहिलेकै संसदले बनाएपनी हुन्थ्यो। संबिधान निर्माणको लागि यो चुनाव हुने भएकोले यसमा देशका प्रत्यक तप्का,बर्ग, जात-जाती, बिचार को प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने हो र यसो हेर्दा लोकतान्त्रीक पक्षहरु एकजुट भएर जानु पर्ने हो। संबिधान सभाको चुनाव सकेसम्म गैर राजनऐतीक चरित्रको हुन पर्ने हो। पार्टीहरुले उम्मेद्वार उठाउदा समाजका बुद्धिजीवी, कानून ब्यबसायीहरु, शिक्षक, ब्यबसायीहरु, मानवाधिकारवादीहरु आदिलाई उठाउन पर्ने हो। तर तिनै पुराना बासी अनुहारलाई उठाइरहेका छन। यिनिहरुबाट नै हुने भए हिजो पनि यिनीहरुनै त थिए नि? किन देशले यो दुर्गाती ब्यहोर्न पर्‍यो?
संबिधानबिज्ञहरु, देश बिदेशका अनुभव भएका ब्यक्तिहरु संबिधान सभामा हुन पर्नेमा तिनै जोशी, खड्का, वली, नेपालहरु छन। यो सरकार बनाउने चुनाव नभएकोले सबै लोकतान्त्रीक दलहरु मिलेर जान पर्नेमा यिनीहरु आपसी भिडन्त गर्दै छन र गैरलोकतान्त्रीक ब्यक्तिहरु निर्वाचित हुने अवस्था निर्माण गर्दैछन।
यो संबिधान सभाको चुनाव हुने अवस्था आउँदा सम्म देशले धेरै गुमाइसकेको छ। यो संबिधान सभाको चुनावको लागि हजारौ जनताको ज्यान गुमेको छ तर माओबादी लगायतका पार्टीहरुको तरिका हेर्दा यती ठुलो उपलब्धी हात्ती आयो हत्ती आयो फुस्सा हुने अवस्थामा पुगेको छ।
सकेसम्म सबै लोकतन्त्रीक पार्टीहरु, नभए घोषणापत्र मिल्ने सम्म का पार्टीहरु चुनावमा एक भएर जान पर्नेमा त्यसो भएन। हुन त त्यस्तो बिधी फरक घोषणापत्र भएको जस्तो पनि देखिएन। जब समान घोषणापत्रहरु छन भने छुट्टाछुट्टै चुनाव लड्नुको के अर्थ हो?
१२ बर्षासम्म संबिधानसभाको रट लगाएर आएको माओबादी संबिधान सभाको चुनाव हुँदा किनरा लाग्ने स्थिती छ। उत्ताउलो भएर कहिले एमाले भन्दा बुर्जुवा प्रजातन्त्रबादी (अर्थात कांग्रेससंग) एकता हुन्छ भन्यो। कहिले राजाबादीहरु भित्रका राष्ट्रबादीसंग मिल्ने भन्यो। फेरी चुनाव हुनु कता हो कता, प्रचन्डलाई भावी राष्ट्रपती घोषणा गर्‍यो। अन्य पार्टीले प्रचन्डलाई राष्ट्रपती बनाउन माओबादीसंग तालमेल किन गर्थे र?
माओबादी चुनावमा बढारिने निस्चित छ तर यो कुनै खुशीको कुरो हुने छैन। जसलाई राजनीतिको मुलधारमा समाहित गर्न यती ठुलो महाभारत रचियो, उनै यो महाभारतमा समाप्त होला जस्तो छ। अर्थात जसको बिहे उनै जन्ती जान नपाउने स्थिती। माओबादी पराजीत हुने चुनावअको कुनै अर्थ छैन। तिनिहरुले फेरी भद्रगोल मच्चाउने छन जसको उदघोष बाबुराम प्रचन्डले गरिसकेका छन।
सर्वप्रथम त न्ोपालको इतिहासमा नै पहिलो पटक हुनलागेको संविधानसभा निर्वाचनमा आफुलाई सहभागी गराउन नसकेकोमा म नेपाल आमा प्रति क्षमा माग्दछु । म अहिले इराकमा कार्यरत छु र मलाई मात्र नभएर सम्पूर्ण इराकमा रहेको नेपालीहरुलाई दूःख लागेको छ किनकी नेपालको इतिहासमा नै पहिलो पटक हुनलागेका संविधान सभाको मिति मात्र दुई साता बाँकी हुँदा संविधानसभा निर्वाचन नहुने हल्ला चल्न थालेकॊ छ । संविधानसभाको निर्वाचनलाई मुख्य मुद्दा बनाएका दलहरुका उच्छृंखल गतिविधि तथा गैर जिम्मेवारपूर्ण व्यवहारले संविधानसभा निर्वाचन हुनेमा आशंका बढेको हो यस्तै नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले विभिन्न चुनावी प्रचारप्रसारको लागि आयोजित कार्यक्रममा माओवादीको हार नहुने र हारे निर्वाचन अमान्य हुने चेतावनी दिँदै आफूलाई जनयुद्धले राष्ट्रपतिमा स्थापित गराइसकेको दाबी गरेका छन् ।
संविधानसभा हुनमा नै आशंका बढिरहेका बेला प्रचण्डले आफूले हारेको चुनाव अमान्य हुने धम्कीले निर्वाचन हुने कुरामा आशंका जन्माएको छ । अर्कोतर्फ माओवादीका अन्य गतिविधिका कारण पनि निर्वाचन हुन कठिन छ । एक अर्कामाथि आक्रमण नगर्ने कागजी सहमति भए पनि व्यवहारमा माओवादीले लागू नगर्दा कठिन स्थिति सिर्जना भइरहेको छ । माओवादीका कारण प्रतिगामी तत्वले चलखेल गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छ । प्रचण्ड र उसका कार्यकर्ताहरु नै चुनावको बाधकको रुपमा रहेको देखिएको छ अहिलेका दिनहरुमा वाईसिएल र छापाचारलाई परिचालन गरेर उम्मेदारहरुलाई बारम्बार आक्रमण गर्न लगाउने यो कहाँको न्याय हो चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा गाउँगाउँ पुगेका उम्मेद्धार र कार्यकर्ता माथि कि बारम्बार आक्रमण गरिन्छ । कि यो पनि केन्द्रको निर्णय होईन प्रचण्ड जीको मुखमा त यै वाक्यले बास गरेको छ । चुनाव भनेकै खुल्ला प्रतिस्पर्धा हो नि कि यो कुरा प्रचण्डलाई कसैले पनि सुनाएन । नेकपा माओवादीले भने ´ै उनिहरुलाई जनताले विश्वास गरेकै हो भने किन रोल्पामा छापामार मात्र धेरै नै प्रयोग गरियो कि रोल्पा जस्तो माओबादीको राजधानीमा पनि जनताले टेरपु´र लाएन माओवादीको अध्यक्ष प्रचण्ड त जनताले नै नचुनिकन राष्ट्रपति भन्दै हिड्दा अलि कति पनि जनताले के भन्ला भनेर सोचेनन् कि राष्ट्रपति भन्दा भन्दै सोच्न भ्याएनन् । प्रचण्ड जी माओवादी कार्यकर्ताले मात्र प्रचण्ड राष्ट्रपति हो भन्दैमा नेपाली जनताले प्रचण्डलाई राष्ट्रपति मान्दैनन् माओवादीले खूल्ला प्रतिस्पर्धा मार्फत् चुनेको खण्डमा मात्र आफुलाई राष्ट्रपति हो भनेर गर्व गर्नुस् ।
केहि दिन अगाडी माओवादीले हामीले संविधान सभाको निर्वाचन जसरी पनि जित्नै पर्छ नजितेको खण्डमा फेरि अर्काे विद्रोह गर्ने चेतावनी पनि विभिन्न चुनावी सभालाई सम्बोध गर्ने क्रममा व्यक्त गर्नु भएको रहेछ यो कुरा मैले भने विभिन्न संचार माध्यमबाट थाहा पाए तर यसको अर्थ त ६ अरब खर्च गरेर संविधान सभाको निर्वाचन नगरेपनि हुन्छ नि यसको त कुनै अर्थ रहेन किनकी जनताले चुनावमा भाग लिएपछि त त्यसको परिणाम त कसैको हार हुन्छ भने कसैको जित हारेकॊ खण्डमा त्यो निर्वाचनको भने मान्ने ता नै नरहने हो त ।अन्तिममा यि र यस्ता कार्य गर्नु भएकोमा भावी हुनलाग्नु भएका ने क पा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई धन्यवादका साथै अगि्रम शुभकामना पनि ।
निर्वाचनको समय जति नजिकै छ त्यति नै सर्वसाधारण जनतामा त्रास बढ्दै गएको छ । परिवर्तनका निम्ति मिठो सपना साँचेर राखेका उनीहरु पटक-पटक हुने झडप अपहरण धम्कीजस्ता गतिविधिले आजको दिनसम्म भयरहित वातावरणमा मतदान गर्ने स्थिति सिर्जना हुन सकेको छैन । नेपाली जनतालाई भय रहित बाताबरणमा निर्वाचन गर्ने अवसर बनाई दिन इराकमा रहेका नेपालीको आग्रह छ र सहि नेता चुनिदिनु हुन पनि नेपाली जनतालाई पनि आग्रह गर्दछौ ।
मुटुमै खिच्यौ त्यो सिमारेखा,मनकै भो हदबन्दी
कटौती गरी के लेख्यो भाबिले भाग्यमै भो मन्दी
बिधी नपुग्या कि अधुरो भाको थियो प्रेमको पूजा
किन दियौ साँढे सातको दशा खनखनी गन्दी
थमौतिको दौड धूप बेकार भएर लड्यो अब
खारीज भयो मेरो दरखास्त थिएन दरबन्दी
खाता चुक्ता नगरि अर्को जुनिलाई उधारो भन्यौ
पराइको हासो सँग मुटु रेट्दी गर्यौ कुन सन्दी
लथालिङ भई छरिएको मन संगाल्न पनि त
भरोसाको घर भात्कियो आधारको जग खन्दी
-हस्त गौतम मृदुल
केटी-मेरो लागी कोही छ की फेरी सिन्दुर लगाइ दिने।
जीवन साथी बनाएर कुन्ठित आशा जगाइ दिने।
केटा-मलाइ माया गर्छौ भने फेरी सिन्दुर लगाइ दिन्छु।
बिधुवाको दाग मेटाइ नयु सपना सजाइ दिन्छु।
केटी-अटल सौभाग्य खोसीेदा बैशैमा बिधुवा भएँ म।
जीवनको त्यो रंग हराउदा िपंडाले साहै रोएँ म।
केटा-जे हुनु थियो भैगयो बिगतको अब शोक नगर।
उजाड त्यो जीवन भरी नयु रंङ्कै रंङ्कले भर।
केटी-मेरो लागी कोही छौ की फेरी चुरा लगाइ दिने।
जीवनभरी अपनाएर शौभाग्यवती बनाइ दिने।
केटा-मलाइ माया गर्छौ भने फेरी चुरा लगाइ दिन्छु।
दुख-सुख बाढीकन नयाँ आशा जगााइ दिन्छु।
केटी-अभाव र तृणा भित्र कहिले सम्म अल्मुी रहु।
बन्धन र बिधी भित्र कहिले सम्म बल्मुी रहु।
केटा-दुख दिने बिधी तोडी अब पाइला चाल्दा हुन्छ।
केटी-मेरो लागी कोही छौकी फेरी पोते लगाइ दिने।
निरस यो जीवनबाट चिन्ता सवै भगाइ दिने।
केटा-मलाइ माया गर्छाै भने फेरी पोते लगाइ दिन्छु।
बिधुवाको दाग मेटाइ जीवन भरी सघाइ दिन्छु।
प्रकृतिक स्वोच्छ सुबास बोकेको एउटा पहाडी आबाज गुन्जियो विश्वभरी छरिएका हिन्दी गीत पारखीलाई मोहनी लगाउन प्रक्रिती बनेर । चिया बगानको मनमोहक सुगन्ध मिसिएको ताजा र मिठो स्वरले धेरैलाई मोहित पारे पनि आज छोटे उस्तादको प्रतिसप्रधा बाट बहिरिएको छ । हुन त जयपुरकी राजाकुमारिले भने झै यो एउटा खेल हो र खेलमा हरजीत हुन्छ ,तर खेलको कायदा कानूनलाई मिचे पछी त्यो झेल हुन्छ अझ रेफ्री नै पक्षपाती भए पछी ओझेल पर्छ जस्तै खेलाडी भए पनि । मनोबैज्ञानीक दबाबमा थिचिए पछी एक अबोध मन कसरी आफ्नो प्रतिभालाई निरधक्क भएर जमाउन सक्छ ,जबकी उन्का प्रतिस्प्रधीलाई निर्णयकले पहिले नै सरताज सर्बोत्तम लेखिएको कागत टाउकोमा लगाएर तथास्तु भन्न आतुर भएको स्पस्ट देखिन्छ । नत्र बिना सुने कसरी फलानोले सरताज सर्बोत्तम पाउछ भन्ने पहिले नै तय गर्न के कुनाल दुर्दर्शी हो त ? तेही गीत लाई प्रितमले एउटा सुन्ने,श्रेयाले र कुनालले अर्को सुन्ने कसरी हुन्छ ? आदेश जस्तो बिसिस्ठ संगीत बिग्यबाट सरताज सर्बोत्तम पाएकी प्रकिती अरुको सुनाइमा केही न केही खोटको भागी हुनु उन्को स्वर हो या नेपाली मुलकी हुनुको करण,यस्मा निस्पक्ष जनताको चासो बढेको हुनु पर्छ।"हमने cleary बताया हे हम किसको चाहते हे,'भनेर पहिले देखी प्रकृतिलाई हटाउन आतुर भएका कुनाल ' उन दोनोके आगे बहुत weak लगा,छोटे उस्ताद I don,t think so " भनेर खुला रुपमा पछी लागेपछी बिचरी प्रक्रिती को के लाग्छ । शायद जो कोहिलाई यो बिझेको हुनु पर्छ । हमेशा दर्शक र जनताको ढुकढुकी बनेकी प्रकृति माथिको यो अन्ध दबाबलाई श्रेयाले दिल मजबुत भएकी,अबोध तथा मेरी राजाकुमारी भनेर चोखिन खोजे पनि अबोध चेहेरामा टल्कियको आसुले पक्कै उन्लाई आत्माग्याली बनाएको हुनु पर्छ। कुनाल जस्ता संगीत नै धर्म ,कर्म मान्यता राख्छु भन्नेले कसरी धर्मको पालन गरे ,जनअदालतले यस्को फैसला गरिदिएको छ जयपुरको ताज प्रकृतिको शिरमा रखिदिएर। गोहिले खाने बेलामा आशु खसाल्छ ,आशु खुशीको हुन्छ जस्को प्रमाण प्रतियोगिताबाट बहिरिए पछी श्रेयाको रानीभएको ,कुनालले सिट्टी मारेको देखे पछी जो कोहि ले अन्दाज लगाउन सक्छ । गोरखाली युद्दको मैदानबाट भागदैन भन्ने शायद उनिहरुलाई महसुस भएको हुनु पर्छ र यो हारमा पनि प्रकृतिको जित भएको छ भन्ने कुरालाई सबैले बुझेको हुनु पर्छ ।अन्तिम दिनको प्रहारको सामना निर्णयक मन्डलीले गर्न सके सकेनन ,तर गोर्खाली प्रहार पक्कै चोटइलो थियो शायद सबैले महसुस गरेको हुनु पर्छ । मोहे सुदबुद ना रही तनमनकी ए तो जाने दुनियाँ सारीबेबेस लाचार फिरु हारी मे दिल हारी बिदाइ हुनलाई प्रकृतिले गाएको यो गीतले भने झै दुनियाँलाई थाहा छ ,यो उनको सुरुवात हो ,सङीतको यात्रामा उनी चम्किलो तारा भएर उदाउने छिन। सबैको शुभकामना ।
Posted by: waka Labels: अनौपचारिक
थुन्न जती खोजे पनि जाली मन त चुइदो रछ
भित्रै भित्र पाके पछी माया पनि त कुइदो रछ
साक्षी राखेका भगवान नि मौन भई दिएछन
छाती पग्ली भेल बगेछी खुशी पनि धुइदो रछ
जुन तारा धेरै टाढा कल्पनामा सिमित भए अब
सुख छैन भागमा जहिले नि दु:खै छुइदो रछ
जनमभरी नफुकोस भनी उनेको भनथ्यौ त
छली माया जती कसे पनि त चाडै फुइदो रछ
आफै मुटु घ्रेरेर आफ्नै मनमा बन्दी भएकोछु
घातका लप्का परेपछी मुटु पोली रुइदो रछ
मान्छे र दिशाहिन राजनीति - १
नेपालको कानुन त्यस्तो घोडा हो जस्को नौंवटा सिंग हुन्छन भने दुइवटा पुच्छर। जताबाट जस्ले छामेपनि उही पुच्छर उही सिंग हात लाग्छ। कसैलाइ यो कानुनको डर र सम्मान छैन। यस्मा जो चडयो उही जंग बहादुर हुन्छ। त्यसकारण यस्को डर कसैलाइ लाग्दैन। छाडा घोडा भएको छ। इज्जत र मान गुमाएको यस घोडाले निर्दोषमाथी छातीमा टेकेर हिन्छ। यसबाट कसैलाइ डर छैन। कसैलाइ भर छैन। यसबाट मान्छेले डराउन छोडीसक्यो। आफै बसेको धरालाइ आतंक्कीत पारेको छ। यस युद्धको बिकराल यात्रामा मात्रिभुमीलाइ डढाउन कस्सिएका छन। मान्छे महाभारतको युद्धबाट चेतिएका छैनन। मान्छे न त पहिलो न त दोस्रो विस्वयुद्धबाट चेतिए। हिरोसिमा नाकासाकीलाइ खरानी बनाए। त्यतिले कहाँ होर नक्ष्ेात्रयुद्धका लागी कम्मर कसेर लागेका छन। मान्छे आफनै घर आगो लगाएर रमाउन चाहान्छ। न त बुद्धको सान्तीले आस्वस्त छ मान्छे न त क्राइष्टको फाँसीले। असन्तोषी र अघोरी जात नै मानबजाती बनेको छ। अत्याधुनिक क्षेत्यास्त्रको होडबाजीमा पृथ्वीलाइ आगो लगाएर अर्को ग्रह खोज्न भौंतारिएको छ। त्यस्मा पनि मेरी आमाको कोखमा आगो लगाउनेहरु दिन दिनै बढेका छन। राष्ट्रिय सम्पदाको आगो खाएर गरिबीको अंगार हग्ने नेताहरुको बिकबिकी बढेको छ। आज मेरो देश अंगार बनेको छ। यही अंगारमा सेलाएको मानबताको गन्ध आर्यघाटमा मात्रै होइन राष्टभरी नै फैलिएको छ। अहिले मेरो देश सिंगो आर्यघाट बनेको छ। बिष्णुको अबतारमा राक्षेस बनेका छन। क्राइष्टको अबतारमा आततायी जन्मेका छन। बुद्धको अबतारमा आतंक्ककारी जन्मेका छन।
आफनो मात्रिभुमीलाइ बेचेर अर्काको आदेशमा शासन गर्ने निकम्मा नेताहरु आज आएर तै चुप मै चुप छन। आ आफनो सिद्धान्तको रोटी खाए पनि अचार भने उतैबाट सुटुक्क माग्छन र आफनो भुमीको माटो भेटी चढाउछन। निरंकुस्ताले कुम्चिएको मेरो भुगोललाइ dmन dmन खुम्च्याउने राजनीतिको अभ्यास चलेको छ। न त यहाँ लोकतन्त्र नै आएको छ न त गनतन्त्र....। यहाँ यि सव भ्रम तन्त्र चलेको छ। केवल भ्रम। यहाँ केवल बिनास आएको छ। बिखन्डन आएको छ। बिध्वंश आएको छ। अराजकत्ता आएको छ। अंशबन्डा आएको छ। केवल मनोमानी आएको छ। खिचातानी नै लोकतान्त्रिक राजनीतिको पहिलो परिभाषा हो। यो परिभाषा पनि उपहारमा पाएका छन। सिमा स्तम्भहरु मेटिएर नयाँ निसानी गाडीएको छ आमाको छातीमा। आँखा चिम्लीए पछि दोबाटोमा हग्न बसे पनि कस्ले देख्छ। जो अगुवा उही बाटो हगुवा नेता परे। आफुले नदेखे कसैले देख्दैन भन्ने राजनैतिक सोच बोकेका नेताहरुले राष्ट्रलाइ घोर राष्टघात गर्दै आएका छन। समयले हरेक गोप्यताहरुलाइ एकदिन छताछुल्ल पारिदिने छ। कसरी कस्ले कतिमा सम्पदा र किस्ताबन्दीमा राष्टियता बेचे भन्ने कुरा। माउले फुल पारे पछि फुल कोरलेर बिकासका चल्ला बढाउनु पर्नेमा फुलै खाइसकेर चित्त नबुdmी माउ नै पोलेर खाइसके। यस्ता लाचार नेताको कारण म बुद्धको सपनामा अटाउन सकेको छैन। नत उन्का आँखामा आँखा बनेर आफुलाइ नै हर्ेन पाएको छु। म मान्छेबाट भागीरहेको छु। मान्छे भित्रको आगो निभाउन न त चानक्य नितिले सक्यो न त कुरानले। इस्वर पनि मान्छेको नजिक पर्न डराइसके। किनभने मर्ुख देखी दैब पनि थरथर काप्छन भने म त मान्छे। फेरी यो मेरो देश मर्ुखहरुको अखडा हो। सहमती र समdmदारी यही मर्ुखताबाट शुरु हुन्छ। के था कुन बेला कुन स्वार्थसिद्धिका लागी बली चढाउने हुन। अग्रगामी कदम नै मानब बलि दिने सजिलो बाटो बनाए यी नरपिचासहरुले। अबतारी विष्णु पनि बलीकै भोका छन। किनभने राजनीतिको आशणमा रगतको रंग नै शोभयमान देख्दछन।
ब्रिटेनले भारतको स्वतन्त्रता दियो र भारतले मेरो स्वतन्त्रता हरण गरयो। सुगौली सन्धीले हामीलाइ बिरानो बनायो। पश्चिम किल्ला काँकडा, पर्ुवमा टुस्टा पुगे थ्यौ। तर........यी कथा भए आज। जबरजस्ती खुम्चीएको भुगोलमा अdmै खुम्चाउन निरन्तर आँच पुरयाउदै आएको छ। कालापानी देखी बिभिन्न भागमा कब्जा गरीसक्दा पनि सरकार मौन छ। किनभने नेताले खाने नुन उतै बन्छ र उतैबाट आउछ। आजका दरबारहरुमा योद्धाका पस्तिपन्जरहरु गाडीएका छन। आस्थाहरु फँासीमा dmुन्डाएका छन। बिचारहरु कत्लेआम भएका छन। ब्रि्रोह सल्केको छ दरबार तिर ...तर....। शिबपुरीको पहाड साक्षी छ कति योद्धाहरु जिउदै पुरिया भनी। फुल्चोकी पहाड साक्षी छ कतीलाइ जिउदै जलाइयो भनी। थानकोटको भीर साक्षी छ कति मारी फालिए भनि।
गोप्यताको साँक्षी यी पहाडहरु मात्रै छन। कसैको केही जोड चल्दैन। कसैको केही पत्तो लाग्दैन। जसरी dmुनकीरिहरु अन्धकारमै बिलाए। आज दूइ दशक भैसक्यो यी पहाडहरु योद्धाहरुको साक्षी बगेको तर।....। दर्रि्रता सवैभन्दा ठुलो नर्ग हो। यही नर्गको बास बसाएर धन्य छन नेताहरु। अति भैसक्यो अब त...। कलंक्की अबतार हुन लागी सक्यो। पशूहरु बोल्ने छन। रुखहरु सलबलाउने छन। यि आततायी मान्छेहरु बिस्तारै पशू हुनेछन। पशूहरु मान्छे....कस्तो अचम्म..।
म बाट स्वतन्त्रता छुटिएको छ। सान्ती संयुत्त राष्ट्रसंघमा कैद छ, या त नेताको षडेन्त्रमा। आलिसान महलमा छ की हवाइटहाउसमा या हिटलरको ग्यासच्याम्बरमा-
संसारमा खोजे पछि नपाइने कुनै बस्तु छैन तर कतै मैले सान्ती देखिन। मलाइ यतिखेर गोपाल प्रसाद रिमालको गीत याद आइरहेको छ, आमा त्यो आउछ र...। हो मलाइ त्यो आउने कुरामा ढुक्क छु। तर मेरो वरीपरी आइसकेर पनि कस्ले लुकाएको छ- कस्ले राखेको छ लुकाइ सिपी भित्र मोती बनाइ- कस्ले साँचेको छ पत्थरभित्र हिरा बनाइ- यदि तिमी आलीसान दरबारमा छौ भने बिर्स त्यो दरबार किनभने दरबारहरु संधै भ्रम र खोक्रो हुन्छन। संधै आडमबर र खिचातानीमा अल्dmेको हुन्छन। त्यो खोक्रो जीवन क्षेणिक र बन्धनमा हुन्छ। शरिर बाँच्नु जीवन बाँच्नु मात्र होइन। आउ समयको बोधीबृक्षमा हामी सवै बुद्ध बन्ने कोसिस गरयौ। बाँच्नुको अर्थ शरिर मरे पनि जीवन जिवन्त रहोस भन्ने हो। भृकुटीको जस्तो साहास लिएर जानु पर्छ। हरेक नेपाली भृकुटी भएर नेपालको सान्ती फैलाउन सक्छौ तर आज....। रुखमुनी छाया त्यो मुनी म कै स्थिति छ। सृजनशिलता नै जीवनका महान गौरभ हुन। साहास हुनेहरुलाइ सफल्ताले चुम्छ। बसेर कुनामा dmिंगा धपाउनेहरुलाइ सफल्ता हात पार्न खोज्नु कुकुरले रुख चर्न खोज्नु जस्तै हो। हरेक नेपाली हरेक पर्ुखाका प्रतिनिधि हुन किनभने हरेक ब्याक्ति उ आफनो राष्ट्र र त्यस्को सुन्दर भबिस्य हुन। देशको सलाइ भित्र रहेका तीन करोड काँटीहरुमा बल्नु छ आफैमा। जोस जाँगर उमल्न्छ ह्रदयभरी। कराइमा दुध उम्लीए
पोखियो भने खरानीमा परिन्छ। देशका युवाकाँटीहरु किन निरंकुस्ताको चिसोले ओसिदै गएका छन। ओसिय भने फेरी बल्न र बाल्न गारयो पर्छ। जहाँका युवाहरु ओसियका छन त्यो देश दर्रि्र हुन्छ। आज युवाहरु गरिवीको चिसोमा ओसिएर बिस्तापित भैरहेका छन। म देशको एउटा स्थानमा धपक्क बल्न चाहान्छु। जहाँ एकठाउको अँध्यारो नासियोस संधैलाइ। म ओसिन चाहान्न। म बल्न चाहान्छु। हे मेरी सान्ती आउ प्रिय मलाइ एकपटक यो धर्तिमा आफनै प्रकास र्छर्ने अबसर देउ। मेरो देश म बिना अँध्यारो छ। जीवन इस्वरको प्रकास हो। यो हरेक संग हुन्छ। मलाइ राष्ट्र र राष्ट्रियताको पहिचान संगै आत्माबोध भयो की देश बिना मान्छे कति दुख हुन्छ।
जसरी चन्द्र र्सर्ुय र पृथ्वी एकदिन एउटै रेखामा भेट गर्छन। त्यसैगरी यो देशमा सान्ती र स्वतन्त्रताको उज्यालो फैलाउनु पर्छ। जीवन प्याजको पत्रै पत्रले बनेको छ। सुन्तलाको केस्रा केस्रै केस्राले बनेको छ। मेरो यो जीवनका हरेक पत्रहरु खस्नु भन्दा अगाडी नै सान्ती आवस भन्ने चाहान्छु। जीवनको केस्राहरु छुटीन नपाउदै आए केही गती पर्ला नत्र...........
मात्सेतुगंको बैशाखीमा हिन्ने हैसियत पनि गुमाएका माओबादीमा आफनो क्षमतामा हिन्न सक्ने साहास रहेन छ। म्ााओबादी पनि उहि बिरबलको खिचडी पकाएर जनतालाइ बेकुप बनाउने भन्दा अरु गर्न सकेन्। उनीहरुको राजनैतिक सिद्धान्त नै अपाङ्ख छ भने अरु कस्को के आशा गर्न सकिन्छ र! आ-आफनो सिद्धान्तबाट बिचलित नेताहरु, जवसम्म अरुको
"शैद्धान्तीक बैशाखी" टेकेर हिन्न छोडदैनन तव सम्म नेपाल र नेपालीको भविस्य शुरक्षित हुन सक्दैन। जव सम्म आफनो खुटटामा उभिन खोज्ने नेता जन्मीदैनन तब सम्म देशमा संकट र्टर्दैन। जन्मेको सातदिनमा सात पाइला हिन्ने हामी बुद्धका सन्तान आज समयको गतीमा एक पाइला हिन्न पनि सकिरहेका छैनौ।
कस्तो बिडमबनामा जिउनु परेको छ आज नेपाली ! अरुको सैद्धान्तीक बैशाखीमा हिन्ने नेता होइन, हामीलाइ बामे सरेर भए पनि आफनै क्षेमता हिन्ने नेता चाहिएको छ। तर बिचरा हाम्रा नेताहरु त, अरुको बैशाखी नटेकी एक इन्च पनि हिन्न सक्दैनन। यस्ता गतिहिन अपाङ्ख नेताबाट देशले काँचुला फर्ेला भन्नु त केवल दिवासपना मात्र होे।
असफल नेताहरुबाट सफल राष्ट बनाउन समभव छैन। किनभने ब्याक्तिगत लाभ भन्दा माथी उठेर हिन्न सक्ने क्षमता हाम्रा राजनैतिक नेताहरुमा छैन। अहिलेको अबस्थामा लोकतन्त्र भन्नेहरु धृतराष्ट, गनतन्त्र भन्नेहरु दुर्योधन, राजतन्त्र भन्नेहरु सकुनी भएका छन। यस अन्यालग्रष्ट राजनैतिक महाभारतको युद्धमा जनता धेरै दिन द्रोपदी बनी रहन सक्दैनन्। नेतालाइ अबस्य चेतना भया।.........क्रमस.........
यस्तै के लेख्ने कसरी शुभाम्भ गरौं भन्ने सोच्दा सोच्दौ यसरी शुरु गरे मैले यस्तै रहेछ यो जिन्दगी विछोडको पिडाले होला मेरो मन गाह्ो भईरहेको बेला पोख्ने ठाँउ नभएपछि यसैको साहारा लिए । पत्र त लेखे तर पठाउने साधनको अभावमा भैतारी रहँदा यसैलाई नै माध्यम बनाउन पुगे इमेल गरु इमेल छैन उनीको साथीलाई पठाउ जाने मान्छेलाई कसरी भनौं मेरो पि्रयसीलाई एउटा पत्र लगिदे भनेर त्यसैले होला यसैको साहाराले पुर् याउने कोशिस गरे अनि शुरु गरे लेख्न छिया-छिया छाती लिएर
पि्रय प्यारी प्रकृति
क्षितिजपारीबाट भए पनि लामो सम्´ना
मलाई भोलि केहि भए दैवले बिचैमा छोडि लगे तिमीले जिउने आधार खोज्नु ।
एकाङ्गकी यो लामो जिवन गुजार्नलाई गाह्ो होला मन मिल्ने जिवनसाथी रोज्नु ॥
सर्घर्ष गर्दा-गर्दाै उतार चडाप भोग्दा भोग्दौ बिचैमा मेरो अवशाङ्ग भए ।
तिमीले जिउने आधार खोज्नु हिड्दै जाँदा भावनालाई बु´्ने
हितकारी मान्छे भॆटे निसंकोच नाता जोड्नु ॥ मलाई भोलि केहि भए……………………
सायद गायक कर्णदासले पनि यो गित मेरै लागि गाएको हुनुपर्दछ । गितको भावनालाई हृदय देखि नै धन्यवाद दिन्छु जसले यो भावनामा डुबेर रचना गरे होलान् सायद त्यस बेला पनि रचयितालाई मलाई जस्तो नै भएको थियो होला अनि कर्णादासले गाउने क्रममा पनि रोएर नै गायका थिए होलान् । सायद तिमीले पनि यो गित सुन्ने अवसर पायौं भने मैले जस्तै हामीले बिताएका ति पलहरुको यादमा आँखाबाट आँसुका धाराहरु बगाउने छौ तर त्यति बेला तिम्रौ आँसु पुछ्ने म अगाडी हुनेछैन । सायद दैवको खेल भनै या जिन्दगीले ल्याएको परिस्थित भनौं आज तिमीबाट धेरै टाढा बम र गालीले छिया छिया भएको ठाँऊ अनि अभावै अभावबाट हिडिरहेको यो इराकमा टन्टलापुर घाम अनि पानीको अभाव सायद यस्तै लेखेको रहेछ भगवानले छौटीमा । प्रकृति तिमीलाई अनि तिम्रो शहरलाई पुष २४ गते छाडेर अर्काै विरानो अनि बेग्लै शहरमा पुगे तर मन भने तिमीमा नै थियो अनि मेरा अगाडी तिमीसँग बिताएका पलहरुको यादगार सम्´नाहरु चलचित्र सरी मेरा आँखा अगाडी आई नै रहे । तिमीसँग विताएको पलहरु एक-एक गरी मेरो आँखामा आई नै रहको थियो । तिमीले चुमेका यी मेरा हातहरु तिमीलाई समाउन अगाडी बढिरहेको हुन्थ्ो । यि मेरा आँखाहरु तिमीलाई देख्न लालायित हुन्थ्ो तर त्यो सबै सपनामा परिणत हुदा मेरा मन धरधर रुन्थे । म आफुलाई सम्हाल्न नसकेर बाथरुममा जान्थे पानी खोलेर आँखाबाट आँसुका धारा निकाल्थे तर पनि के गर्ने । जिन्दगी यो लामो यात्रा सँगै-सँगै विताउला भन्ने सोचेको मात्र के थिए सायद भागवानले पनि यो मन्जुर गरेनन् । सायद हाम्रो मायामा कतै खोट पो थियो कि । सायद हामीले माया भन्ने शब्दको परिभाषा नै थाहा पाएका थिएनौ कि पढ्न गाह्ो भईरहेको होला होईन कि तिमीले यो पत्र पाउना साथ च्यातेर त फ्याकिनै सायद सत्य सधै नै तितो हुन्छ । मलाई पनि लेख्ने बेलामा धेरै नै कष्ठ भईरहेको थियो होला कल्पना गर त । सायद आँखाबाट आँसुका धाराहरु सम्हाल्न सकिरहेको छैन त्यसैले नसकेर होला रोकिने कुरै गर्दैन । तर तिमी त आनन्दले सुत्दै हाँैली अफिसबाट घर आउदा पनि छस्किदौनौ होली । मसँग विताएका पलहरु त तिम्रोलाई कहि जस्तो पनि लागेको थिएन होला । सायद धोकाको पिडा त मलाई खान लेखेको रहेछ क्या रे । धोका भन्दा जिवनमा अरु केहि पनि नपाईएला जस्तो छ । पत्र लेख्दा सम्ममा त छिनो आराम छु भन्नु पर्ला अनि तिमी त कुशलै छै हौल्ाी होईन ।
कुरा के हो भने जब मैले आउने बेलामा आमासँग कुरा गरेको थिए तर त्यहि फोन मेरोलाई अभिसाप भयो प्रकृति मैले तिमीलाई एयारपोर्टबाट पनि फोन गरेको थिए तर तिमीले मसँग कुनै कुरा भने नगरी फोन काटिदियौ । त्यो भन्दा अगाडी मैले तिम्रो आमासँग लामो कुराकानी गरेको थिए तर यस पटक भने तिम्रो आमामा धेरै परिवर्तनहरु आएका थिए । तर पनि मैले तिमीसँग कुराकानी गरेर त्यसको समाधान निकाल्न भने नखोजेको होईन तर तिमीले कुरा नगरी फोन काटिदिए पछि सोचे विछोडको पिडाले होला बोल्न नसकेकी भन्ने लाग्यो र तिमीलाई इराकबाट असहज परिस्ििथतमा पनि फोन गरे तर तिमी उल्टै नचिनेको बाहाना गरौ अनि मेरो मुटु छिया-छिया भएर टुकि्रयो त्यत्ति बेला मैले संसार नै धुमेको अनुभव गरे मलाई त्यत्ति माया गर्ने मेरी प्रकृति आज किन परिवर्तन आखिर मैले के गल्ती गरे उनीले भयौ भन्दौमा घरमा आमासँग हामी दुईको जिन्दगीको बारेमा कुरा गरे के मैले यहि नै गल्ती गरे कि उनीले भनेका सबै कुराहरुलाई मानेर उनीलाई जिवनसाथीको रुपमा अँगाल्नु खोज्नु चाँहि मैले गल्ती गरे । प्रकृति मैले तिमीसँग गर्न खोजेको कुरा पनि आज म यसै पत्रमा गर्दैछु यसलाई पनि केहि समय निकालेर पढ ल । यति बेला भने मेरा मनहरु रुदा-रुदा थाकिसकेको छ तर पनि आँखाबाट आँसुहरुले सिरानी भने छिजेकै हुन्छ । आमाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि राम तिमीसँग जति पनि प्रकृतिले दिएको चिनो छ त्यो सबै कि फ्याकिदिनु कि फिर्ता गरिदिनु अनि प्रकृतिसँग विताएका हर क्षणाहरु भुलिदिनु म पनि प्रकृतिलाई फोन गरेर तिम्रो केहि चिनो भए फ्याक्न लगाउछु । म प्रकृतिलाई अरुसंग नै विवाह गराई दिने निधोमा पुगेको छु । सायद यो बाक्यले नै मेरो जिवनमा ठूलो भुईचालॊ ल्यायो प्रकृति आमाले त्यो कुरा भन्नु भयो तब जब म कार्यलयबाट मेनपावरको अफिसमा जार्द गर्दा तर फोन भने मैले गरेको थिईन ।
प्रकृति आमा बुबा भनेको हाम्रो भगवान हुन्छन् । सायद आमाबुबाको आदेश मान्नु नै जिन्दगीमा राम्रो होला । आमाबुबाले आफ्नो छोराछोरीको लागि कहिलै पनि नराम्रो सोचेका हुदैन । तर तिम्रो त आमा भने नि बुबा भने नि त्यहि आमा हुन् । आमाका कुरालाई कहिलै पनि नकाट्नु आमाले देखाएका बाटोमा हिड्नु बाचा गर्दछु तिमीले कहिलै जिन्दगीमा दु ःख पाउने छैनौ । हेर आमा एक्लै हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ विछोड हुनुको पिडा अनि रोदन थाहा त तिम्रो आमालाई पनि हुनुपर् यो तर तिम्रो आमाको मन त ढुंगा रहेछ अथवा आफुले भोगिसकेको भएर होला भित्रि मनहरु रुदा-रुदौ पनि बाहिरको मनलाई कडा बनाउनु भएको थियो होला । प्रकृति अन्तिममा आमालाई मेरो धेरै-धेरै सम्´ना भनि दिनु अरु कुराहरु त त्यस्तै हुन् म कम्प्यूटरमा काम गर्दछु अहिले मेरो डियूटी रातीमा छ मेरो राती नेपालको ९ बजे देखि विहान ९ बजेसम्म हुन्छ । हामीले डुयूटी भने १२ घण्टाको गर्नु पर्दछ । कामको क्रममा भुल यहाँ माफी हुदैन सिधै नेपाल पठाईदिन्छ तर मेरो भने काममा त्यत्ति मन भने लागेको छैन त्यहि पनि कोशिसमा छु । सायद कसैको याद र सम्´नालाई विर्शिन सके भने काममा मनलाग्ला कि भ्ान्ने छिनो आशाहरु रहेको छ । खानाको राम्रो व्यवस्था नभएपनि बस्नको भने राम्रो व्यवस्था छ । फोन गर्ने इच्छा हुदा-हुदौ पनि प्राविधिक समस्याहरुले गर्दा इच्छाहरु पुरा भएको छैन । म इराकको राजधानी शहरबाट नजिकैको ऋबुउ ब्लबअयलमब द्यबबिम भन्ने ठाउमा छु । यहाँ त बमहरु फ्याकेको फ्याकै हुन्छ कति बेला बम आउँछ र बङ्किरमा लुक्न जानपर्ने हो त्यो कसैलाई पनि थाहा हुदैन । सुरक्षित हुदाहुर्दाै पनि कहिले काँहि अपि्रय घटनाहरु हुन जान्छ । काम सजिलो भए पनि १२ घण्टा काम गर्नु पर्ने र विदा नमिल्ने अनि यहाँको निति नियममा बस्नु नै हामीहरुको लागि गाह्ो कुरा हो । म भएको ठाउमा धेरै नेपाली दाजुभाइहरु रहेका छन् हामी नेपालीहरु कामबाट थाकेर कोठामा छौं अनि कसैले पे्रमका कुरा गर्छन् त कोहि सुख दुःखका कुराहरु एक अर्कालाई भनेर आफ्नो थकाई मेटाउने गर्दछन् तर म भने त्यहि दिनहरुको कल्पनामा नै विलाई रहेको हुन्छु ताकि तिमी मबाट टाढा नहोसर तर तिमीले मलाई याद गर्दिनै होली आए देखि त बाढुकी पनि लागेको छौन सपनीमा पनि आउदिनै किन हो किन तिमीले त माया मारि पॊ सकै जस्तो लाग्छ पि्रय । र्लौ त आजलाई यत्ति नै भगवानले राखेछन् भने अनि कुशलै रहे भने अगाडीका दिनहरुमा प लेख्ने छिनो कोशिस गरौंला । मनमा लागेका तिता मिठा कुराहरु यिनै हुन् । तिम्रो र मेरो जिन्दगीको कुराको निर्णय त अगाडी मैले अगाडी गितका भावनाबाट पोखिसके त्यसैलाई बास्तविकता लिनु । मेरो जिवन भरी नै तिम्रो यादहरु आई नै रहनेछ । जिन्दगीको दोबाटोमा भेट हुनु अलि परसँग सँगै यात्राहरु पार गदौ जाँदा ।एक अर्काे बीच माया पिरती गाँसिनु यो त प्रकृतिक नियम नै हो यसैलाई अनुशरण गरेको थियौ होला सायद दोबाटोमा भेटभएपछि अर्काे दोबाटोमा छुटिनु नै पर्छ होला होइन र प्ा्रकृति त्यसैले होला दोबाटो आउनु भन्दा पहिले नै तिमीले मलाई छोडिदियौ बाँकी यात्राहरु काट्न अब फेरि पनि एक्लै पर्ने भयो यस धर्तीमा एक्कै आएको थिए अबका यात्रा पनि एक्लै काट्दै बाँकी यात्रा तय गर्नुपर्ला तिम्रो जिवन खुशी र सुखिदायक वितोस् कष्ट अनि बेदना कहिलै पनि नआयोस् यसै शुभकामना सहित यो विरानो अनि अभावै अभावको बातावरणमा भुल्ले कोशिसमा लाग्नेछु । तर प्रकृति धोका मानिसको लागि अति नै पिडा दायक हुन्छ । अब अरुलाई धोका नदिनु ल ।
राम प्रसाद पन्त अन्जान बनबासी
टोडन फोडन खप्पिश रछौ चिनो पठाकोछु
छाती खोप्न सजिलो होला छिनो पठाकोछु
बेला कुबेला नजर जुध्ला भनी नडराउ
भरोसा कुहिएर गन्हाको सिनो पठाकोछु
बाटो पर्दा कतै नजर पर्ला घरमा भनी
सुकुमबासी भै भात्किएको छानो पठाकोछु
सुदामाको कुटी भित्र माया नै त थियो दिन
धेरै धन कमायौ कि भर्न मानो पाठाकोछु
बधाई र कामना मेरो कोशेली तिमीलाई
आसुले रुझ्दै लेखेको अन्तिम पानो पाठाकोछु
परपर सम्म उज्यालो छर्छु भन्थ्यो,मन्दिरामा बलेको दियो
आधि बेहरी ठुलै चली भागा भाग ,शहरमा चलेको थियो
पूरानो भएर हो कि सिङौरी खेलेर हो धुजाधुजा भयो रे
टाल्नै नसक्ने भो अनगिन्ती प्वाल ,बिचरो त्यो गलेको सियो
कागत भरी खोइ के के कोरी माटो रोप्छु भन्थे रे कोही कोही
टोक्नु न बोक्नुको फल फलेछ आज ,चाहेरै फलेको कि यो
दांईको बेला आयो अब अन्नबाली राम्रो सित भित्र्याउनु छ
गोरुहरु छाडा भए टेठो चाहियो, गाढन त्यो ढलेको मियो
कहिले दयामा ,कहिले मायामा बल्लबल्ल बटुलेको पैचो
के पकायो के बाड्यो भान्छेले किन होला,कसैले नि नलेको चियो
मदिराका बुद छन कि नजरमा मात लाग्यो
पिउन भनेर तान्न के खोजेथे बात लाग्यो
ईन्द्रको अप्सरा हौ कि रजपटकी कामुक नायिका
भोगचलन गर्न नसक्ने इच्छाको खात लाग्यो
श्रदालाई तिरस्कारमा जाक्यौ च्वास पोल्ने गरी
दिल भरी कसोकसो सिस्नुको पात लाग्यो
भुतले खाजा खाने बेला जुराइएछ साइत
झिङा भन्किएको बासी चिज मात्तै हात लाग्यो
होश उडाउने हासो कसैको नासो भएछ अब
मनमा सकुनिको पासा भन्दा कडा घात लाग्यो